Emechara ọtụtụ nkọwa nke Galaxy M30s | Gam akporosis
Filters na nkọwa nke Galaxy M30s tupu ya ngosi
Galaxy M30s ga-abụ ekwentị na-esote n'etiti nke Samsung, nke nwere ụbọchị ntọhapụ. Ekwentị a ga - apụta karịa ya niile nnukwu batrị, Ikike 6.000 mAh. Ọ bụ n'ụzọ dị otú a ekwentị nke akara Korea nwere batrị kachasị ukwuu. Na mgbakwunye, nke nta nke nta anyị na-amụtakwu.
Fewbọchị ole na ole gara aga, ndị nkọwa mbụ nke Galaxy M30s. Ugbu a anyị achọta leak ọzọ na-enye anyị ozi ndi ozo banyere uzo ohuru ohuru a nke akara Korea. Enwere ihe nzuzo ole na ole maka ekwentị a tupu ngosipụta ya na Septemba 18.
Galaxy M30s ga - eji Super AMOLED nke 6,4 inch buru ibu. Ihe bụ ihe ọzọ, ihe nhazi ahụ dị na ekwentị ahụ ga - abụ Exynos 9611, nke ga-abịa na njikọta abụọ nke RAM na nchekwa dị n'ime nke a. 4/6 GB na 64/128 GB n'ihe banyere nchekwa, ka ndị ọrụ nwee ike ịhọrọ nke ha chọrọ. Anyị enweghị ike ichefu batrị 6.000 mAh ya.
Ekwentị ga - abia na igwefoto okpukpu atọ, dị ka a na-ahụkarị n'ime etiti etiti na gam akporo. Onye isi ihe ntanetị 48 MP, yana ihe mmetụta 8 MP na ihe omimi 5 MP na ebe nke atọ. Maka n'ihu a ga-eji otu ihe mmetụta 24 MP mee ihe na nke a.
Anyị nwere ike ịhụ n'ezie na Galaxy M30s ga - abụ oke etiti, yana nkọwa dị ugbu a. Nke a bụ ihe ga - enyere gị aka ire ahịa ka ọ dị mma, na - enye aka na a ọganihu kasịnụ nke ezinụlọ a nke Galaxy M, nke na-ere ahịa nke ọma na India ruo ugbu a.
India ga-abụ obodo ebe a ga - eweta Galaxy M30s a, na mgbakwunye na nke mbụ n'ime ya. O yikarịrị ka ọ ga-akwụsị ịmalite na Europe, dịka o mere na ụdị ndị ọzọ n'ụdị a. Yabụ ọ nwere ike ịbụ ọdịda a ịzụta ya na Spain na eze.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Filters na nkọwa nke Galaxy M30s tupu ya ngosi
Realme Ajụjụ: middị ọhụrụ ọhụụ ahụ bụ nke gọọmentị